भूकम्पले मुटु हल्लाउँदा … - China Radio International
(GMT+08:00) 2015-05-12 10:16:09
अप्रिल 25 तारिख अर्थात् बैशाख 12 गते, शनिबार। सधैँ जस्तै बिहान उठेर एकघन्टाको हिँडाइ र कसरत अनि खाजा खाएरपछि नुहाइ धुवाइ। कम्प्युटर खोलेँ र काठमाडौँको गौशालामा रहेका आफ्ना परिवार निर्मला र छोराछोरीसँग स्काइपमा भिडियो कुराकानी गरेँ। निर्मला दिउँसो खाना खाएर पाटन अस्पताल जाने कुरा गर्दै थिइन्। दाङका साथी प्रकाश अधिकारीकी आमाको केही दिन अगाडि पाटन अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेकाले भेट्ने जाने उनको इच्छा थियो।
नेपालकोभन्दा चीनको समय दुई घन्टा 15 मिनेट छिटो छ। तसर्थ नेपालमा साढे नौ नहुँदै चीनमा साढे एघार नाघ्ने हुनाले मेरो खाना खाने समय भयो। म खाना खान गएँ। सहकर्मी लक्ष्मी लम्साल बिहानै बाहिर निस्कनु भएकाले म कोठामा एक्लै छु। खाना खाएर कोठा फर्किएपछि म टेलिभिजन हेर्नमा व्यस्त रहेँ।
गैर आवासीय चिनियाँ युवती रेन्नी छिन नेपाली भाषामा केही चर्चा गर्नका लागि हामी बसेको ठाउँमा आउने कुरा थियो। उनी चीनको पल्लो शान्षी प्रान्तबाट 10 वर्ष पहिले न्युजिल्याण्डमा बसाइ सरेकी र त्यहीँ चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्दै गरेकी रहिछन्। पैचिङको वातावरणमा छ महिने अनुसन्धानका लागि उनी अहिले चीनमा छिन्। उनले नेपालमा केही समय बसेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयंसेवीको काम पनि गरेकी हुनाले र केही नेपाली भाषा पनि जानेकीले मसँग थप चर्चा गर्न उनी इच्छुक थिइन्। मैले उनलाई एक बजे कोठामा बोलाएको थिएँ। उनले मलाई मोबाइलमा म्यासेज गरेर केही ढिलो हुने जनाउ थिइन्। अन्ततः उनी सवा एकमा आइपुगिन्।
उनी आएपछि मैले टेलिभिजन बन्द गरेँ र हामी नेपाली भाषामा छलफल गर्न थाल्यौँ। उनीसँग कुरा गर्दा गर्दै डेढ घन्टा बितेछ। तीन बजे मैले कफी बनाएँ। उनी कोही साथीलाई भेट्न जान अलिक हतारिएकी थिइन्। उनले राति निद्रा नलाग्ने र मुटुको धड्कन बढ्ने हुनाले कफी खान त्यति इच्छा देखाइन्। मैले पनि खान मन छैन भने भैहाल्यो तिमी नखाऊ म चाहिँ खान्छु भन्दै कफी खान लागेको थिएँ। शनिबार परे पनि मैले अफिस जानु थियो। तर हिजो चिनियाँ सहकर्मी राजु र लालिमाले आज चाहिँ खाना खाएर एकै चोटि साढे पाँचतिर मात्र अफिस आउने सल्लाह गरेका थिए र मलाई पनि त्यही अनुसार सूचना दिएका थिए।
कफी खाँदै गर्दा लालिमाजीले फोन गर्नुभयो। ठ्याक्कै3बजेर 23 मिनेट गएको थियो अर्थात् नेपालको समय अनुसार दिउँसो 1 बजेर 8 मिनेट जाँदा। उहाँले मलाई फोनमा भन्नुभयो तपाईं अलिक चाँडो अफिस आउनुपर्छ। मैले किन भनेर प्रश्न गर्नासाथ उहाँले सोध्नुभयो 'तपाईंलाई नेपालको बारेमा केही थाहा छैन?' लौ के सोधेको म रनभुल्लामा परेँ। किनभने रेन्नी आएपछि मैले कम्प्युटर बन्द गरेको थिएँ भने टिभी पनि बन्द थियो। लालिमाजीले थप प्रष्ट्याउनुभयो 'नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको छ। धेरै क्षति भएको छ। तपाईं तुरुन्तै अफिसमा गएर आफ्ना परिवारलाई फोन गर्नुहोस्। हामी साढे तीनसम्ममा अफिसमा भेटौँ है।' लालिमाको कुराले म छक्क परेँ। मैले रेन्नीलाई नेपालमा भूकम्प गएछ। म अलिक चाँडो अफिस जानु पर्नेभयो भने। उनी त मसँग बिदा माग्नका लागि उभिइसकेकी थिइन्। उनलाई बिदा गरेर म अफिस जानका लागि तयारी गर्न थालेँ। मैले तयारी गर्दा गर्दै निर्मलाको मोबाइलमा फोन गरेँ तर फोन लागेन। अनि आशिष भान्जा, रशेम भाइ र रेनुकालाई फोन गरेँ कसैलाई पनि लागेन। गौशालाको कोठाको फोनमा गरेँ फोन लाग्यो तर उठेन।
अफिस पुगेर मैले स्टूडियोबाट नेपालमा फोन गर्न थालेँ। स्टुडियोबाट बारम्बार फोन गर्दा पनि कसैलाई सम्पर्क हुन सकेन। त्यतिबेलासम्म मलाई नेपालको भूकम्पको भयावह प्रभावका बारेमा जानकारी थिएन। मैले अफिसमा कम्प्युटर खोलेँ र विभिन्न अनलाइन समाचारहरु हेरेँ। जब काष्ठमण्डप र धरहरा ढलेको समाचार देखे तब मभित्रको बेचैनीको डिग्री एकाएक उच्च भयो। यस अगाडि मैले अन्य बेलामा जस्तै सामान्य भूकम्प होला भन्ने ठानेको थिएँ। म फेरि स्टुडियो पसेँ र धमाधम फोन हान्न थालेँ। मैले विभिन्न संचार संस्थाका कार्यालयहरुमा पनि फोन गरेँ तर कतै पनि फोन उठेन। सबै मानिसहरु कुनै पनि भवनमा बस्ने अवस्था नभएर बाहिरी खुल्ला भागमा बसेका छन् भन्ने कुराको मैले त्यतिन्जेलसम्म हेक्का गरिन। कुनै मोबाइलमा फोन नलाग्ने र घरको फोन नउठ्ने भएपछि मैले गंगबु क्षेत्रमा बस्ने प्रकाशबाबु पौडेललाई फोन गरेँ। भूकम्प गएपछि उहाँसँग मेरो पहिलो फोन सम्पर्क भयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको स्थितिको जानकारी गराउँदै प्रिपेड मोबाइलमा नलाग्ने तर पोष्ट पेड मोबाइलमा लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले सुझाव दिनुभयो 'तपाईंका परिवार बसोबास गर्ने गौशाला नजिकै कसैको पोष्टपेड मोबाइल भएमा त्यहाँ फोन गरेर घरको अवस्था बुझ्नुहोला।'
मेरो परिवार र भाइ रमेशको परिवार गौशाला क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। श्रीमती र छोराछोरीसँगै भान्जा आशिष बसेको कोठा घरको चौथो तलामा छ। घर पनि त्यति परिपक्व छैन। घर पिलर सिस्टमको नभएको र अत्यन्त कमजोर भएकाले मेरो कोठामा पुगेकाहरुले अरु बेला पनि मलाई त्यो घरमा नबस्न धेरै पटक सुझाव दिएका थिए। एकातिर काठमाडौँमा कोठा पाउन मुस्किल अर्कोतिर मलाई कोठा सर्न लाग्ने अल्छीको मिलनले गर्दा विगत 13 वर्षदेखि म त्यही घरमा बस्दै आएको थिएँ। 2068 सालमा गएको सानो भूकम्पका बेला पनि आफन्त जनहरुले व्यापक चिन्ता प्रकट गर्दै तारन्तार फोन गरेका थिए।
एकातिर इन्टरनेटमा र टेलिभिजनका पर्दामा देखिँदै आएको काठमाडौँको भूकम्पको क्षति र अर्कातिर आफ्ना परिवार बसेको घरको अवस्थाले मलाई द्रबित बनाउँदै थियो। परिवारका बारेमा कतैबाट पनि कुनै सूचना पाउन सकिरहेको थिइन।
मैले पोष्ट पेड मोबाइल भएका मान्छेहरु सम्झने क्रममा कान्तिपुको नेपाल साप्ताहिकमा कार्यरत जनकराज सापकोटालाई फोन गरेँ। उहाँले काठमाडौँको गौशालातिर खासै क्षति नभएको बताउँदै अन्य भागको क्षतिको विवरण दिनुभयो। अनि मैले भक्तपुरमा बस्ने महेश आचार्यलाई उनको पोष्ट पेड मोबाइलमा फोन गरेँ। उनी मेरा भतिजा पनि हुन्। उनले आफूहरु सुरक्षित रहेको तर गौशालामा फोन सम्पर्क नभएको बताए। उनलाई तुरुन्तै गौशाला जान आग्रह गरेँ। उनले पुल धसेर बाटो अवरुद्ध भएको बताउँदै आधा घन्टामा जसैगरी पनि गौशाला पुग्ने बताए। नभन्दै उनी आधा घन्टामा गौशाला पुगे। उनले मलाई फोनमा भने 'म गौशाला तपाईंको डेरा अगाडि आइपुगेँ।' त्यतिखेर मेरो मुखबाट अनायसै निस्कियो 'मेरो डेरा भएको घर ठाडै छ कि कस्तो छ?' उनले घर जस्ताको तस्तै रहेको बताउँदै चौथो तलामा गएर कोठामा ताल्चा लगाएको बताएपछि उफ्रिरहेको मुटु र हल्लिरहेको मथिङ्गल केही शान्त भयो। घरको अगाडि चौरमा रहेका मेरा परिवारका सदस्यसँग महेशको फोनमा मैले कुरा गर्न पाएँ र उनीहरु सुरक्षित रहेको जानकारी लिएँ।
परिवारका सदस्यहरु सुरक्षित रहे पनि देशमा आएको महाविपत्तिले मलाई सताइरहेको थियो। इन्टरनेटमा धरहराको भग्नावशेषका फोटाहरु छरिन थालेका थिए। नेपाल बाहिर रहे पनि मैले त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको दर्दनाक चित्कार महसुश गर्न थालेको थियो। सधैँ साढे साँझको पाँच बजेसम्ममा खाना खाइसक्ने भए पनि मैले फोन गर्दा र नेपालको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदालिँदै सात नाघेको थियो। हामी कार्यालयमा खटिरहेकाहरुका लागि खाना मगाइएको रहेछ। परिवारका सदस्यहरु सुरक्षित रहेको जानकारी पाएपछि अब मलाई राष्ट्रको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने संस्थागत दायित्व थपियो। मैले सूचना तथा संचार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा मीनेन्द्र रिजाललाई फोन गरेर सरकारको औपचारिक धारणा रेकर्ड गराएँ। त्यसैगरी क्यापिटल एफएमका अध्यक्ष प्रकाशबाबु पौडेल र कान्तिपुरका साथी जनकराज सापकोटाको छोटो अन्तर्वार्ता पनि रेकर्ड गराएँ। महेश आचार्यले त धरहराको भग्नावशेष क्षेत्रमै गएर हामीलाई त्यहाँ वस्तुस्थितिको प्रत्यक्ष जानकारी गराए।
नेपालमा विनासकारी महाभूकम्प गएकाले सीआरआई नेपाली सेवाले समाचार बाहेकका नियमित कार्यक्रम रोकेर विशेष सामग्री प्रसारण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। कार्यालयमा प्रमुख वर्षाज्यूसँगै सबै चिनियाँ सहकर्मी भेला हुनु भएको थियो। सहकर्मी अजयजीले पनि भूकम्पसम्बन्धी विशेष सामग्री बनाएर रेडियोमा रेकर्ड गराउनुभयो। समाचार रेकर्ड गराउँदा रातको दस बज्न लागेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मृत्युवरण गर्नेहरुको तथ्याङ्क आउन थालेको थियो। हाम्रो पहिलो तथ्याङ्कमै मर्नेहरुको संख्या6सय नाघेको थियो। सबै चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्थाहरुको ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुँदै थियो।
मलाई चिन्ने चिनियाँ साथीहरु र विभिन्न देशका साथीहरुले नेपालको भूकम्पबाट चिन्तित हुँदै परिवार र आफन्तको अवस्था के छ भनेर मलाई फोन，म्यासेज，विच्याट र क्वूक्वूबाट सोध्न थालिसकेका थिए। देश घाइते भएर पीडामा छटपटाइरहेको समयमा म मेरा परिवारहरु सुरक्षित छन् भनेर कसरी जवाफ फर्काउन सक्थेँ र！तर पनि शिष्टाचारका लागि देशमा प्राकृतिक विपत्तिको भयावह प्रभाव भए पनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरु सकुशल रहेको भन्दै उनीहरुको सद्भावप्रति धन्यवाद प्रकट गरिरहेको थिएँ।
भूकम्पको असर सोचेभन्दा भयानक र त्रासदीपूर्ण हुँदै थियो। राति दसबजेतिर नेपाली सेवाकी प्रमुख वर्षाजीले मलाई फोन गरेर चिनियाँ उद्दार टोली भोलि बिहानै नेपाल जान लागेको जनाउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिसा लिने व्यवस्थाका बारेमा सोध्नुभयो। मैले चिनियाँ अधिकारीलाई अनएराइभल भिसा लिन कुनै समस्या नभएको उहाँलाई बताएँ।
नेपालमा गएको भूकम्पबाट चिनियाँ संचारमाध्यम र चिनियाँ सरकारलाई पनि उत्तिकै चिन्ता लागेको थियो। त्यही भएर चीनले तुरुन्तै नेपालमा उद्दार सामग्री सहितको विशेषज्ञ टोली पठाएर सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु अशल छिमेकीपनको सच्चा नमूना थियो। राति साढे दस बजे म कोठामा गएँ। कोठामा गए पनि मेरो मथिङ्गल भूकम्पले घुमाइरहेको थियो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दू गोरखाको वारपाकभन्दा हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको मलाई प्रत्यक्ष रुपले भूकम्पको कम्पन महशुस हुन नसके पनि मानसिक रुपमा म रन्थनिरहेको थिएँ। हरेक आधा घन्टामा मर्नेहरुको संख्या थपिँदै जाँदा र भूकम्पका क्षतिको फोटोहरु इन्टरनेटमा देखिँदै जाँदा मलाई भूकम्पको पीडा बल्झने क्रम अझै तीब्र हुन थालेको थियो।
क्यानाडामा बसोबास गर्नुहुने मेरा काहिँला ससूराले मसँग स्काइपमा सम्पर्क गरेर नेपालको भूकम्पका बारेमा कुराकानी गर्नुभयो। उहाँले नेपालगंजका दाइहरु बलदेव अधिकारी र ध्रुब अधिकारीका छोरीहरु धरहरा चढ्न गएका र भूकम्पमा परेको अपुष्ट समाचार दिनुभयो। मैले निर्मलालाई राति फोन गरेँ। राति दस बजेपछि नेपालका प्रिपेड मोबाइलहरु सुचारु भएका थिए। निर्मलाले पनि बलदेव दाइ र ध्रुब दाइका छोरीहरु धरहरा चढ्दा देहान्त भएको सुनाइन्।
मलाई भाउन्न भयो। भूकम्पको धक्का बारम्बार लागेको महशुस हुन थाल्यो। आफन्त र प्रियजन गुमाउँदाको पीडालाई कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ र! हुनत भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउने आठ हजारभन्दा बढी नागरिकका सबै आफन्तहरुको संख्या लाखौँ हुनसक्छ। घाइतेको अवस्था उत्तिकै दर्दनाक छ। लाखौँ मानिसहरु घरबार बिहिन भएर सडकमा पुगेका छन्। कलिला नानीहरुले अभिभावक गुमाएका छन् भने कयौँ अभिभावकको काख रित्तिएको छ। म हरेक समाचार पढ्दा आँशुको भेलमा डुब्न थालेँ। सिङ्गो मातृभूमिको पीडा विदेशमा बसेका नागरिकलाई कसरी छचल्किदो रहेछ भन्ने कुराको गहिरो आभाष हुन थाल्यो।
भरखरै एसएलसी दिएकी छोरीलाई काठमाडौँ घुमाउन लिएर आउनु भएबा ध्रुब दाइले छोरीलाई धरहराबाट सधैँका लागि बिदा गरेर फर्कनु परेको छ। भरखर 10 वर्ष पुगेकी छोरीलाई बलदेव दाइले आफ्नै हातले दागबत्ती दिनु परेको छ। कति कठोर र कति निर्दयी छ यो प्राकृतिक विपत्ति! हामी टाढा बसेर सुन्नेहरुको मुटुमा सधैँ भूकम्प गइरहन्छ भने ती आत्मीय प्रियजन गुमाउने परिवारभित्रकाहरुको मुटु कस्तो होला? सुत्ने बेलामा थाहा पाएको ती दुई कोपिला चुँडिएको खबरले मलाई अझै अशान्त र अधैर्य बनायो। मध्य रातको 12 बजे ओछ्यानमा जानुभन्दा अगाडि नै सपना मेरो आँखामा नाच्न थाल्यो जहाँ रक्तमुछेल नेपाल आमा छाती पिटिपिटी आत्मलाप गरिरहेकी थिइन्।